सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म ६ हजार बढी मानसको कोरोना परीक्षण — Imandarmedia.com
१यी २७ सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको तयारी
२कसलाई आयो लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने अफर ?
३नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
४वर्तमान राजनीतिकबारे कस्तो कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली
५फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भरहेको छ कारोबार ?
६मौसम सम्बन्धि भर्खरै आयो यस्तो जानकारी, हावाहुरीसहित कहाँ-कहाँ पर्दैछ असिना पानी ?
७जलबीरे पुल तयार, २६५ मिटर दूरी छोटियो,कहिले बाट पुल सञ्चालन गर्ने तयारी
८भारतले किन दिदैछ १८ वर्षभन्दा मुनिका सबैलाई कोरोना खोप ?
९नेपालमाआज सार्वजनिक बिदा
१०कोरोना महामारीकाबीच आज सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा, राष्ट्रपतिले दर्शन गर्ने
११कोहलपुरमा २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हेर्नुहोस बिबरण सहित।
१२के तपाईलाई पटक-पटक पिसाब लाग्ने समस्या छ ? त्यसो भए लागेको हुनसक्छ यस्तो रोग, आजै ख्याल गर्नुहोस
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म ६ हजार बढी मानसको कोरोना परीक्षण
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबारसम्म ४ हजार ९ सय ८६ जनाको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुधबारसम्म र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधि र प्रयोगशालामा गरी ६ हजार जना भन्दा बढीको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आरडीटी विधिबाट तीन हजार ५ सय ९ जना र पीसीआर विधिबाट एक हजार ४ सय ७७ जनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई हजार ५ सय २८ जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा प्रयोगशालाबाट एक हजार ५१ जनाको नमुना परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ ।
र्‍यापिट टेष्टअन्तर्गत ३ हजार ५ सय ९ जनाको नमुना संकलन गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार, बुधबारसम्म कैलालीमा १ हजार सय ४३, कञ्चनपुरमा ४ सय १५ , बैतडीमा १ सय ४६, डडेल्धुरामा ९३, डोटीमा ३ सय १२, बझाङमा ४ सय ६४, अछाममा ६४ र बाजुरामा ६३ जनामा र्‍यापिड टेस्ट गरिएको छ ।
पीसीआर प्रबिधिबाट १ हजार ४ सय ७७ जनाको परीक्षण गरिएकोमा ५ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनीहरु सबैको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यस्तै प्रदेश १ सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १५ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषका लागि यसअघि छुट्याएको १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेकाले १५ करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार रातिदेखि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
उनले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तर्जुमा गर्न बनेको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावित, पहिचान तथा राहत वितरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, सोलुखुम्बुको खम्बु पासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष निमदोर्जी शेर्पालाई पाँच लाख र क्यान्सर पीडित पत्रकार कमल पौडेललाई तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने पनि निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।